हरेक दिन सासुलाई खाना संगै बि'ष खु'वाउने बुहारी - Filmy News Portal Of Nepal
आरती नाम भएकी एउटी युवतीको बिहे भयो । बिहेपछि आरती आफ्नो पति अनि सासू–ससुराका साथमा पतिघरमा बस्न था’लिन् । केही दिनमै उनलाई महसु’स भयो उनकी सासूसँग उनको स’म्बन्ध स’हज हुनेवा’ला छैन । सासूका साथमा बसेर बाँकी जीवन बाँ’च्न उनलाई अस’ह्य क’ष्टक’र हुने देखियो ।
सासू पुरानो विचारकी, बुहारी आधुनिक सोचा’इकी । कुरा कसरी मि’ल्नु र ? दिनहुँ भना’भ’न हुन था’लिहा’ल्यो । दिन बिते, महिना बि’ते र वर्ष पनि बि’त्यो । न त सासूले बुहारीका विषयमा ती’ता टी’काटि’प्पणी गर्न छा’डिन् न त बुहारीले मुख फर्का’उन ।
सम’स्या झ’न्भन्दा झ’न् ख’राब हुँदै गयो । आरती आफ्नी सासूलाई ए’कदम घृ’णा गर्न थालिन् । जब समाजका अन्य मानिसका अगाडि उनले सासूप्रति आ’दरभाव र शि’ष्टता प्र’कट गर्नुपर्ने अवस्था आइला’ग्थ्यो, उनलाई अस’ह्य हुन्थ्यो । उनी सासूबाट छु’टका’रा पाउने उ’पायका बारेमा सो’च्न लागिन् । तर हाम्रो समाज यही हो, भनेजति सजिलै सासूबाट मु’क्ति मि’ल्दैन ।
त्यसमाथि लोग्नेले त्यस सम’स्यालाई वा’स्तै गरिदिएन भने ना’री एक्लै’ले वि’द्रो’ह गरे पनि केही हुनेवा’ला छैन । एक दिन उनको सासूसँग निकै न’राम्रो गरी झ’गडा भयो । लो’ग्नेले आमाको प’क्षमा लागेर उनैलाई दो’षी भ’निदिए । उनी नि’रा’श, दुः’खी र क्रो’धित भएर माइत पुगिन् । आरतीका पिता आयुर्वेदका डा’क्टर थिए ।
उनले पितालाई आफ्नो दु’खेसो रुँ’दैरुँ’दै सुनाइन् । अ’न्त्यमा उनले भनिन्– ‘हजुरले अब मलाई कुनै क’डा वि’ष दि’नुपर्यो । म त्यस दु’ष्ट बूढीलाई खानामा मिलाएर खु’वाइदिन्छु । वि’ष दिनुहुन्न भने म त्यस घरमा अब कहिल्यै पाइलो रा’ख्तिनँ ।’ पितालाई छोरीको दुः’खले दुः’खी ब’नायो । उनले छोरीलाई प्रेमपूर्वक शिरमा थप्थ’पाए । उनले भने– ‘छोरी ! तिमीले आफ्नी सासूलाई वि’ष खुवा’एर मा’र्यौ भने ढि’लोचाँडो पुलिसले प’त्ता लगाएरै छा’ड्छ ।
तिमी जे’ल जा’नेछौ र मलाई पनि पुलि’सले जे’लको ढोकाबाट भित्र छि’राउनेछ, किनभने वि’ष दिएर ष’ड्य’न्त्रमा स’घाएको आ’रोप मलाई पनि ला’ग्नेछ । यसो गर्नु ठीक हुँ’दैन ।’ तर, आरती आफ्नो ढि’पीमा अडि’ग र’हिन् । उनले भनिन्– ‘हजुरले मलाई वि’ष दिनैपर्छ । जस्तोसुकै आ’पत् आइ’लागोस् बरु, तर अब म त्यस बूढीको मु’ख हेर्न चा’हन्नँ ।’
पिताले केहीबेर सो’चेपछि भने–‘त्यसो भए तिम्रो खु’सी ….। म के गर्न स’क्छु र ? तर, तिमीलाई पुलि’सले ह’त्कडी ल’गाएर जे’लमा हा’लेको दे’ख्न म सक्ति’नँ । मैले जसो भन्छु त्यसो गर्छौ भने मात्र म तिमीलाई वि’ष उ’पलब्ध गराउन सक्छु । हुन्छ भने‘हुन्छ’भन …।’
‘मैले के गर्नुपर्छ त ?’आरतीले भनिन् । पिताले वि’षको एउटा पु’रिया हातमा दिँदै भने–‘तिमीले हरेक दिन यो विषको एक चि’म्टी मात्र सासूको खानामा सु’टुक्क मि’साउनुपर्छ । वि’षको यति थोरै मात्राले कोही म’रिहा’ल्दैन, बरु बि’स्तारै बि’स्तारै नजानिदो गरी शरीर शि’थि’ल हुन्छ,भित्रभित्रै ऊ रो’गाउँदै जा’न्छ र छ महिना जतिमा मानिस म’र्छ ।
तिम्री सासूलाई तिमीले दिनहुँ अलिअलि वि’ष खु’वायौ भने उनी वि’षका का’रणले हैन प्राकृतिक कारणले म’रेकी हुन् भनेर सबैलाई विश्वास हुन्छ ।’ पिताले फेरि भने–‘तर तिमीले यो काम अत्य’न्त हो’सिया’री पूर्वक गर्नुपर्छ । ज्वाइँसाहेबलाई क’त्ति पनि श’ङ्का हुनुहुँदैन । कुनै का’र’णव’श तिमीले ला’पर्बा’ही ग’रिहाल्यौ भने तिमी र म दुवै जी’वनभर जे’लमा स’ड्नेछौँ । बु’झ्यौ हैन कुराको गम्भी’रता ?
त्यसैले आजदेखि उ’प्रान्त तिमीले सासूसँग झ’गडा गर्न भएन, बरु उहाँको ठी’कसँग से’वा ग’र्नू । कसैले तिम्रो बारेमा टी’काटि’प्पणी गरिहा’ल्यो भने पनि तिमीले चुप’चाप सु’न्नू । कुनै पनि किसिमले जबा’फ नफ’र्काउनू । भन,यो सब गर्न सक्छौ ?’ आरतीले सो’चिन्–‘के भो र,पाँच – छ महिनाको कुरा त हो । त्यसपछि त बूढी म’रि’हाल्छे । यति समय त स’हनै पर्यो नि ।’
उनले पिताको आ’देश पूर्ण रुपले पा’लन गर्छु भनेर वि’षको त्यो पु’रिया लिएर गइन् । घर आइपुगेको भोलिपल्टै देखि उनले सासूको खानामा हरेक दिन ब’डो हो’सिया’री पूर्वक अ’लिअ’लि गर्दै वि’ष मि’लाउन था’लिन् । उनले सासूका प्रतिको व्यव’हा’रमा पनि परिव’र्तन ल्याइन् । बूढीका ती’ता वचन पनि चुप’चाप सहिन् । जतिसुकै रि’स उ’ठे पनि उनी त्यो रि’स दबा’एर अनुहारमा मुस्का’न ल्याउन प्रय’त्न गर्थिन् ।
उनी आफ्नी सासूको से’वा र ट’हल गर्न पनि था’लिन् । राति सुत्ने बेलामा गोडा’समेत थि’चिदिन्थिन् । बूढी अब केही महिनाकी पा’हुना मात्र थिइन्, त्यसो भएकाले बूढीका हरेक इ’च्छा पूरा गर्न उनी प्र’यत्न गर्थिन् । उनका सबै कुरा सुनिदि’न्थिन् ।
आरतीले सासूलाई मन पर्ने खाना र खाजाहरु त’यार ग’रिदिन्थिन् । सो’धीसो’धी नयाँनयाँ परिका’र ब’नाएर दिन्थिन् । सासूको राम्रो ख्या’ल गर्न था’लिन् । उनका आ’ज्ञा पा’लन गर्न था’लिन् । केही हप्तामा सासूको व्य’वहारमा परि’वर्तन आ’यो । आफ्नो कुरामा बुहारीले जबाफ नफर्का’एकाले बूढीको क’चकचमा कमी आयो ।
बूहारीले आफ्नो सेवाशु’श्रूषा गर्दा अब बूढी आशि’ष दिन पनि थालिन् । छर छिमेकमा आफ्नी बुहारीको बारेमा न’चा’हिँदा टि’प्पणी गर्न पनि छा’ड्दै गइन् । बि’स्तारै बिस्तारै समय बि’त्तै गयो । आरती हरेक दिन न’बिराई वि’षको मात्रा बूढीको खानामा मिला’उँथिन् ।
चार महिना बि’तेपछि उनले वि’षको मात्रा अ’लिअ’लि गर्दै बढा’उन पनि था’लिन् । केही दिनमा वि’षको मात्रा पूरा भयो । यता उनको घरको वाता’वरण भने एकदम ब’दलिइसकेको थियो । सासू–बुहारीको झ’गडा एकादेशको कथा भइ’सकेको थियो । छिमेकी आइमा’ईहरुसँग आफ्नी बुहारीको नि’न्दा गर्न नथा’क्ने सासू अब आफ्नी बुहारीको प्रशंसामा समय बि’ताउन था’लिन् ।
बि’स्तारै सासूले उनको पनि धेरै ख्या’ल गर्न था’लिन् । बुहारीसँगै खान न’पाउँदा उनलाई खाना खाएजस्तै हुन छा’ड्यो । सु’त्नुअघि बुहारीसँग प्रेम’पूर्वक बो’लीचा’ली गर्न पाइनन् भने उनी रा’तमा ठी’कसँग सु’त्न पनि स’क्न छा’डिन् । छैटौँ महिना लाग्ने बेलासम्ममा आरतीले विचार गरिन्– सासू उनलाई आफ्नै छोरीलाई झैँ माया गर्न था’लेकी छन् ।
हेर्दाहेर्दै आरतीले आफ्नी सासूमा आफ्नी आमाको प्र’तिबि’म्ब देख्न था’लिन् । आफूले खु’वाएको वि’षको असरले सासू म’र्ने दिन नजि’किँदै आयो । आरतीलाई यस कुराले चि’न्तित बनाउन था’ल्यो । अब उनलाई ला’ग्न थाल्यो सासू न’मरि’दिऊन् ।यस्तै ऊहा’पोह’का बीच उनी माइत गइन् । उनले आफ्ना पितालाई भनिन्–‘पिताजी, मलाई त्यो वि’षको असर समा’प्त पार्ने औ’षधि दिनुहोस् ।
अब म आफ्नी सासूलाई मा’र्न चा’हन्नँ । उहाँ सारै असल हुनुहुन्छ । मलाई उहाँ आफ्नै आमाजस्तो लाग्छ ।’लपिता एकद’म जो’डले हाँ’से । उनले हाँ’स्तै भने–‘वि’ष ? कुन वि’ष ? मैले त तिमीलाई वि’ष हो भनेर खाना प’चाउने औष’धिको पु’रिया दिएको थिएँ । – एजेन्सी